फिल्मी शैलीमा ईन्दिराको इन्गेजमेन्ट ? यी हुन हुनेवाला दुलाहा – ramechhapkhabar.com
फिल्मी शैलीमा ईन्दिराको इन्गेजमेन्ट ? यी हुन हुनेवाला दुलाहा
गएको वर्षको फागुन महिनाको पहिलो हप्ता गायिका ईन्दिरा जोशीले आफ्नो हातमा लगाएको औंठीको फोटो सेयर गर्दै क्याप्सनमा लेखेकी थिइन्, ‘२ वर्षको साथ र आउँदो जीवनका समयको निरन्तरता… अन्तिम श्वाससम्म हामी सँगै हुनेछौं।’
तस्बिरमा उनले शिमरी गुलाबी करसेटका साथ हरियो स्कर्ट लगाएकी छन् । जसमा उनले दुक्स ब्लान्ड बनाएकी छन् । नेहा यो फेसन सेन्स कारणले ट्रोलको निशानामा परिरहेकी छन् । नेहाले जु स्टाइल बनाएकी छन् । त्यो स्टाइल हलिउडमा आफ्नो गीत सार्वजनिक गर्ने बेला प्रायः गायिकाले बनाउने गर्दछन् । नेहाले लुक्स कपी गरेको कारण उनी ट्रोलको निशानामा परेकी हुन् । उनको यो लुक्सलाई थुप्रैले कमेन्ट गरेका मजाक उडाएका छन् । ती मध्ये एकले लेखेका छन् ‘दिदी बनिन् शकिरा, भइन् फकिरा ।’ सञ्चारकेन्द्र